Just changing name could not fool the world | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
HomeJust changing name could not fool the world
Just changing name could not fool the world
May 25, 2017 drkokogyi
Whether you change name from Kyone Take, Lone Take or Mg Mya, although no one revealed I knew immediately since then that he was an MI assassin because …..
He was the body guard of President San Yu, joined the Burma Communist for many years, tried to reach the inner circle and once hadachance to guard the Chairman Thakhin Than Tun going to toilet, killed, wrapped with plastic, buried and run back to mother unit, military….
So 969 to Ma Ba Tha and even if change to few other names…we all know.
ဖျံကျတယ်ဆိုတာက အလိမ်ခံလိုက်ရသူတွေ ဘာမှ မသိ
လိုက်အောင် ကြွမ်းကျင် ပိရိ ပိုင်နိုင်တဲ့ အလုပ်မျိုးကိုခေါ်တာ။
မလုပ်ခင်ကထည်းက အားလုံးသိနေတဲ့ လိမ်နည်းမျိုးကြ
ကြွက် ကျတယ် လို့ခေါ်တယ်။
ပလိပ်ရောဂါ မပျံနှံ အောင် ကမ္ဘာတလွှား ဘယ်နေရာမှာ
ကြွက်ကျကျ UN က ဦးစီးပြီး အဆိပ်ကြွေးပါတယ်။
← There are some rotten racist monks even in Ma Ha Na
ဗုဒ္ဓဘာသာကို အားပေးချီးမြှောက်ရမှာဖြစ်သလို အခြားဘာသာများကိုလည်း ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ တာဝန်ရှိကြောင်း သာသနာရေးဝန်ကြီးပြော →
One thought on “Just changing name could not fool the world”
23 May at 18:15 · Kuala Lumpur ·
ဆိုင်းဘုတ် ဖြု တ်တာ တတ်တာ အရေးမကြီးဘူး……
လုပ်ရပ်တွေကို ပြင်ဖို့ လိုတယ်
ဥပဒေနဲ့ ဆန့်ကျင်တာ
အမုန်းစကားပြောတာမှန်သမျှအရေးယူ
ဟိုလူ မို့ အရေးမယူဘူး
ဒီကိုယ်တော် မို့ လွှတ်ပေးထားတာ
အစိုးရနဲ့ မဟန က ကိုယ်တော်ကြီးတွေ
ပြည်သူအများက ထောက်ပြမှ သိကြတော့မှာလား